AMD Pressure ကြောင့် Laptop တွေအတွက် Graphics Card အသစ် မိတ်ဆက်ဦးမယ့် Nvidia - PX
AMD Pressure ကြောင့် Laptop တွေအတွက် Graphics Card အသစ် မိတ်ဆက်ဦးမယ့် Nvidia
တစ်နေ့တုန်းက Radeon RX 5600 XT (Desktop Graphics Card) ကို Bios Update လုပ်ပြီး RTX 2060 ကို ကျော်သွားတဲ့အထိ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးအောင် လုပ်ချလိုက်လို့ ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး Nvidia အသည်းသန် ဖြစ်သွားဟန် ရှိပါတယ်။
ဒါတင်လားဆို မဟုတ်သေးပါဘူး၊ CES 2020 ပွဲမှာတုန်းကလည်း 7nm (RDNA – Radeon DNA Architecture) အခြေခံထားတဲ့ Radeon RX 5600M Mobile GPU ကို မိတ်ဆက်ပစ်လိုက်ပြီး သွေးတိုးအောင် လုပ်ထားသေးပါတယ်။
RTX 2060 Killer (Image: AMD)
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ “မင်းတော်တော်များပြီနော်လို့ မပြောရုံတမယ်” တန်ပြန် တိုက်စစ် (7nm Ampere) မခင်းနိုင်ခင် Laptop တွေအတွက် Super စီးရီး Graphics Card ထုတ်မယ်လို့ သတင်းထွက်လာပါတယ်။
မှန်ပါတယ်၊ RX 5600M ဟာ Mid-Range Graphics Card တွေထဲမှာ Strong အဖြစ်ဆုံး RTX 2060 ကို ရိုက်ချိုးထားပြီး GTX 1660 Ti ထက် လုံးဝသာနေတဲ့ ကတ်ဖြစ်လို့ အရှိန်မသတ်နိုင်ရင် သေချာပါတယ် Gaming with Ryzen ၊ Radeon ဖြစ်လာတော့မှာပါ။
အဲ့ဒါကြောင့် ကောလာဟလတောင် မထွက်တော့ဘဲ မတ်လအတွင်းမှာ မျိုးဆက်သစ် Ampere GPU တွေကို ကြေညာတော့မှာပါ။ 7nm ပေါ်မှာ အခြေခံထားမှာဖြစ်ပြီး လက်ရှိ Turing Chips (RTX 20-series ၊ GTX 16-series) တွေထက် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း မြန်ဆန်လာမယ် (ဟုတ်ရဲ့လားမသိရသေး)
ဒါပေမယ့် AMD ဖိအားပေးတာ အတိုင်းတာတစ်ခုထိ လိမ့်ခံနေရဦးမှာ ဖြစ်ပြီး Mobile Arena မှာပါ ဆက်တိုက်ရိုက်နေတဲ့ဒဏ် ခံသာအောင် Super Series ကတ်ထုတ်မယ်လို့ သတင်းထွက်လာပါတယ်။
AMD အနေနဲ့ Mobile Upper Class မှာ Nvidia RTX 2070 ၊ 2080 Chips တွေကို ကျော်နိုင်တဲ့ Graphics Card မရှိသေးတဲ့အတွက် GTX 16-series Super ကတ်တွေ မိတ်ဆက်လာနိုင်ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူတွေ သုံးသပ်ချက်အရ GTX 1650 Super ၊ GTX 1660 Super နဲ့ကြားထဲက ထော်လော်ကန့်လန့် GTX 1650 Ti ကတ် ထွက်လာနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်ထားပါတယ်။ အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ RTX 2060 Super ကတ်ကို မြင်ရဖို့ရှိပြီး Radeon RX 5000M series တွေကို တန်ပြန် တိုက်စစ်ဆင်မယ့် ကတ်တွေလို့ ယေဘူယျ ပြောနိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် GTX 1650 Ti ဟာ Radeon RX 5500M Counterpart ဖြစ်လာနိုင်သလို ပေါက်ကြားလာတဲ့ Specification အရ GTX 1660 မတိမ်းမယိမ်း စွမ်းဆောင်ရည်ရှိနေမယ်၊ VRAM မှာပဲ (4GB vs. 6GB) ကွာသွားနိုင်တဲ့အတွက် Lower Mid-Range ကတ် (GTX 1650 Ti) ကို မြင်ရနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုပဲ Budget တန်းမှာ ဖိအားပေးလာမယ့် RX 5300M အတွက် GTX 1650 Super (Codename: N18P-G62) ကတ် ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ 4GB GDDR6 VRAM ပါရှိမှာဖြစ်ပြီး Max-P ကတ်က 50W TGP ၊ Max-Q ကတ်က 35W TGP ပြောထားတဲ့အတွက် Super စီးရီးမှာတောင် Max-Q Version မြင်ရမလား မပြောတတ်သေးပါဘူး။
Rumour (Image Credit: Notebookcheck)
ဒါကတော့ လက်ရှိ AMD မိတ်ဆက်ထားတဲ့ RX 5000M Series ၃ ကတ်ကို Counter လုပ်မယ့် Nvidia ကတ်တွေပါ။ AMD အနေနဲ့ ဘာဝှက်ဖဲ ကိုင်ထားလဲ မပြောနိုင်ပေမယ့် Nvidia ကတော့ အဆင်သင့် ပြင်ထားဟန်ရှိပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ N18E-G3R ၊ N18E-G2R ၊ N18E-G1R စတဲ့ Codename တွေဖြစ်ပြီး ကျွမ်းကျင်သူတွေ Code ဖြေထားချက်အရ RTX 2080 Super (Max-P: 150W+ ၊ Max-Q: 80W) ၊ RTX 2070 Super (Max-P: 115W ၊ Max-Q: 80W) နဲ့ RTX 2060 Super (Max-P: 115W ၊ Max-Q: 80W) ကတ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Image Credit: Timeincuk.net
အခုလိုသာ Super ကတ် မိတ်ဆက်ဦးမယ်ဆိုရင် RTX 2060 ဟာ Mid-range တန်းမှာ ပါဝါစားအများဆုံးကတ်ဖြစ်လာမယ် (115W vs. 90W) ၊ AMD ဖိအားကြောင့်သာ GPU Version အသစ် ထွက်လာမယ်ဆိုမယ့် Gamer နဲ့ Gaming Industry ဘက်ကကြည့်ရင် ဘာကိုရွေးပြီး ဘာတွေ လိမ့်ထုတ်ဦးမှာလဲ?
Razer တောင် GTX 1650 အသုံးပြုထားတဲ့ Blade Stealth 2019 ကို ဒေါ်လာ ၅၀၀ လျှော့ရောင်းနေတဲ့အတွက် Internal Leak တွေက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေပါတယ်။
မတ်လ ဆိုရင်ပဲ 7nm Ampere လာမှာဆိုတော့ တပွဲထိုးကတ်တွေ ဝယ်သုံးကြမှာလား? ဘယ်လိုပဲပြောပြော အပြိုင်ဆိုင်ပြင်းထန်လာတဲ့ CPU/GPU တိုက်ပွဲက ကြည့်ကောင်းနေပေမယ့် လေ့လာချက်တွေအရ ဂိမ်မာအများစုဟာ RTX 2070 နဲ့ GTX 1060 ကတ်တွေကိုသာ အသုံးများကြောင်း Nvidia ကြေညာခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်ကနေ ၄ နှစ် တာကာလ စစ်တမ်းအရ သိရပါတယ်။
Source: Notebookcheck ၊ TechRadar
ပြန်သုံးနိုင်တဲ့ ထုတ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းနဲ့ ညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချမယ့် Samsung
Ultrabook စံနှုန်းကို ရိုက်ချိုးပစ်ဦးမယ့် Intel Project Athena ဆိုတာဘာလဲ?